ỊTỤGHARỊ NA NYOCHAGHARỊ RAY NA AGHA V NA-EJI NWAYỌỌ NWAYỌỌ BELATA ARỤMỌRỤ NKE KALỊNDA VIDIO NVIDIA - AKỤKỌ - 2019
Ray na-enyocha BFV na-ebelata arụmọrụ nke kalịnda vidio Nvidia ọkara
DICE agbakwunyere nkwado nkwa ahụ maka ihe ntanye na kalịnda vidio Nvidia ka ọ bụrụ onye na-agbawa ngwá agha V, mgbe Hardwareluxx nyochaa mmetụta nke nhọrọ a na arụmọrụ. Dị ka ọ dị, ndị na-emepe vidiyo na-enwe usoro ọhụụ ọhụrụ nke siri ike.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ihe nkedo nyocha na Nvidia GeForce RTX na-eji ihe ọkụkụ vidiyo eme ihe, iji nkà na ụzụ a na-ebelata okpukpu abụọ karịa ugboro abụọ.
Na mkpebi nke 1920x1080 pikselụ mgbe ị na-eji flagship Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, nkezi FPS si na 151 ruo 72 okpukpu abụọ kwa nkeji, na mkpebi nke 2560x1440 pikselụ - site na 131 ruo 52 okpukpu abụọ kwa nkeji, na mkpebi nke 3840x2160 pikselụ - site na 75 ruo 28 okpokolo agba kwa nke abụọ .
N'otu aka ahụ, a na-ebelata arụmọrụ nke kaadị vidiyo obere ala.